Soosaarayaasha bilaa baclaha ah, Taageerayaasha bilaa gadhka ah - Aihome
Nagu saabsan & Kooxdayada
Qaboojiyaha la qaadan karo
Teknolojiyada wax soo saarka bislaada
Waxaan haynaa in ka badan 300 oo xuquuq madax-bannaan oo aqooneed, oo ay ku jiraan 25 shatiyada hal-abuurka, in ka badan 50 shatiyada caalamiga ah.
HK AIHOME OEM Solution waxaan fahamsanahay inaad raadineyso inaad badeecadaada u qaadatid suuqa kaliya adeegga saxda ah iyo shaqooyinka.
Magacyo caan ah oo caan ka ah adduunka oo dhan ayaa iskaashi la sameeyay HK AIHOME si loo xusho loona soo saaro wax soo saarkooda, loona kobciyo ganacsigooda.
HK AIHOME waxay u heellan tahay dhisida barxad caalami ah oo caqli-gal ah, oo ku hareeraysan aalad caafimaad leh oo caqli badan, iyada oo la siinayo alaab guriyeysan oo heer sare ah iyo adeegyo xirfadeed oo loogu talagalay iibsadayaasha adduunka. Bixinta xalka ugu fiican ee qalabka guryaha ee iibsadayaasha caalamiga ah, iskaashi wadaag ayaan kaa caawin karnaa inaad ku guuleysato guushaada ganacsiga.
Dhismaha Muuqaalka Smart
Alaabooyinka ugu dambeeyay uguna kulul
Kulul iyo Qaboojiye Tower Fan
Taageeraha Tower-ka ee kuleylka iyo qaboojinta waxaa bixiya alaab-bixiyeha marawaxadda ugu fiican ee Shiinaha, qiimaha taageere munaarad gorgortanka Kuleyliyahaan mashiinka mashiinka kululeeyaha leh howlaha qaboojinta iyo kuleylinta ayaa ah kan ugu fiican ee laga helo munaaradda khadka tooska ah.
Taleefanka Nadiifiyaha Hawada ee Qaboojiyaha iyo kululeeyaha
Sifeeyaha Hawada iyo marawaxadda kululeeyaha ee leh miiraha HEPA waxaa ku jira sifaynta hawo iyo shaqooyinka marawaxadaha waxaa sameeya alaab-bixiyeha hawo-siiiyaha hawada ugu fiican. Marawaxadan oo leh shaandho hawo leh xawaare la hagaajin karo iyo heerkulka ayaa dajin kara hawo iyo hawo kulul
Desk Hawo Sifeeyaha Bir La'aanta
Marawaxad kulul iyo qabow oo leh hawo sifeeye hawleed, 3 kiiba 1 ee marawaxad aan lahayn, kululeeyaha iyo hawo nadiifiyaha. Taageerahaan bilaa fan-ka ah ayaa ka kooban shaandhada HEPA waxaana loo habeyn karaa warshaddeena faan-laaweyaasha aan daab lahayn.
Cusbooneysiinta Wax soosaarayaasha cusub
Qalabka qoyaanka u gaarka ah ayaa codsan kara shaqooyin dheeri ah sida shaqada udugga, shaqada sifaynta hawada iyo laambadda UV ee nadiifinta nadiifinta. Qoyaanka huurka wuxuu u isticmaali karaa salka hoose ama adeegsiga warshadaha iyo MOQ u baahan yahay
Nadiifiyaha Hawada Casriga ah
H13 HEPA Sifeeyaha hawo sifeeyaha xasaasiyadaha iyo xayawaanka rabbaayadaysan, oo waliba shaandheeya qiiqa, boodhka iyo caaryada. Sifeeyaha hawadan caadada ah waxaa kujira nidaamka sifeynta hawada oo ay kujiraan miiraha hore iyo miiraha kaarboonka iyo miiraha HEPA.
Qaboojiye Casri ah oo La Qaadan Karo
Pqaboojiye ortable qaboojiye gacanta jilicsan-taabashada iyo bandhigay LCD cad, waxa ay si toos ah u lulid bidix iyo midig, kor iyo hoos lulid gacanta. Qalabka qaboojiyaha la qaadan karo ee Smart-ka ah oo leh laba-guri nidaam waxaana loo isticmaali karaa siyaabo badan.
Fan aan lahayn oo hawo leh ...
Taageere bilaa biin ah oo Rem ...
Fekerka Isku-laabmi Kara ...
Qallajiye kululeeyaha Fan W ...
Slim Bladeless Tower F ...
Turbo Wareega Fan, ...
Fanaaniinta Dahabka ah, Fan C ...
Sifeeyaha Hawada iyo Kuleylka ...
Slim Tower Fan Air Pur ...
Sifeeyaha Hawada Iyo Badeecada ...
Sifeeyaha Hawada ee aan lahayn ...
Fan aan qallafsaneyn oo leh ...
Sifeeyaha Hawada Gawaarida leh ...
Nadiifiye hawo leh HEPA ...
Nadiifinta Qoyska ...
Desktop Hawo Sifeeyaha w ...
Qoojiye loogu talagalay Basem ...
Qoyaanka ugu fiican ee ...
Ganacsi / Musqusha de ...
Sawaxanka Sawaxanka Hoose ...
Custom huurka huurka ...
3 1 1 Hawada la qaadan karo ...
Multi Wuxuu Adeegsadaa Ai ...
Qaboojiyaha Gudaha ...
4 ku jira 1 Nooca la qaadan karo A ...
Hawlgal aamusnaan ah
Teknoolojiyada aamusnaanta gaarka ah. Khibrad socodka hawada oo nabad ah.
Nalalka niyadda badan
Muuqaalka casriga casriga ah ee badalaya nalka ka dooro 4 nal oo kala duwan
Isticmaalka tamarta oo hooseeya Biilasha tamarta
Waxqabadka saacadaha la dhisay
Saacad otomaatig ah oo otomaatig ah. Ma jiro biilal culus oo lama filaan ah.
HangKong Crossbow Brand (Zhejiang), Technology Co. Ltd waxaa la aasaasay dabayaaqadii 2020, laakiin warshadeena waxaa la aasaasay 2004. Kooxdayadu waxaa lagu aasaasay iyada oo ku saleysan himiladeenna asaasiga ah ee bixinta adeegyo ganacsi oo ka wanaagsan oo xirfad leh macaamiisha adduunka. HK AIHOME, oo ah shirkad wadaag ah, ayaa isku dhaftey warshadaha ugu caansan dalka Shiinaha waxayna u heellan tahay dhisida barxad caalami ah oo aqal gal ah, kuna hareeraysan qalab caafimaad iyo caqli badan leh, oo bixisa alaab guri oo heer sare ah iyo adeegyo xirfadeed oo loogu talagalay iibsadayaasha adduunka. .
iibinta sanadlaha ah
Qolka 502, Dhismaha 5, 601 Qiuyi Road, Changehe Street, Degmada Binjiang, Magaalada Hangzhou, Gobolka Zhejiang